FAQs - Hongwugas Gas babetha System
System Hongwugas ™
Hongwugas ™ CSSP Ukutyubhisha
Hongwugas ™ Lokulinganisa
Uyilo & Ukufakwa
Incence Stainless Ukutyubhisha (CSST) yi umbhobho bhetyebhetye, stainless ingasetyenziswa ukunikeza igesi yendalo kunye propane e nezakhiwo zokuhlala, ezorhwebo kunye noshishino.
Ziziphi iingenelo eziyi- igesi bhetyebhetye?
Ngaphandle kokunikeza iyahlala omkhulu, CSST guquka, evumela ukuba sangena ngeenxa zonke iindonga kwaye nemiqobo nezilinganisi olufunekayo kuphela eziphelweni run nganye. Ukunciphisa inani lwezilinganisi kuluncedo njengoko ngamnye iimfuno ezongezelelweyo ngokudibeneyo yenziwe ukuze ihlolwe ukuba evuzayo. A CSST inkqubo igiza igesi amalungu ngaphantsi, neendlela ngoko ngaphantsi kuvuza enokwenzeka .
Ingaba CSST Kukhuselekile ukusebenzisa ekhayeni lam?
Njengazo zonke iinkqubo igiza igesi ezivunyiweyo, CSST ukhuselekile xa ifakwe kakuhle. CSST kufuneka zifakelwe yi ngokuhambelana oyingcali kunye ne Design umenzi kunye Ufakelo (D & I) Guide, kuquka ubuhlobo kunye isiseko sale nkqubo.
Yintoni ekwakheni ubuhlobo kunye nozinzo?
Ekwakheni ubuhlobo: Idibanisa iinkqubo ebuntsimbi ukuseka ukuqhubeka zombane kunye conductivity.
Isisekelo: Idibanisa emhlabeni okanye iqumrhu conductive oluya phantsi uqhagamshelwano.
National Association Of iimashali zomlilo State (Nasfm) uqala lonke Yellow Csst Safety Campaign NASFM ihlombe US Yeengwevu ukuba bapase Sigqibo Ngokukhuthaza Imigudu Bemfundo Ukuphucula Ukhuseleko kwama-6 Million ...
© HONGWUGAS Copyright - 2010-2017: All Rights Reserved. - Amandla ngu Globalso.com